Fametrahana drafitr'asa momba ny drafitrasa mahomby
Ho an'ny mpampianatra Ho tonga mpampianatra iray
Ampiharo ny drafitr'asa momba ny fampianarana an-tsitrapo
Mandika ny fahitana momba ny raharaham-barotra ho an'ny mpanjifa
Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanomboka orinasa fandraisana andraikitra ianao ary efa nodinihanao ny asan'ny orinasa tianao, iza no mety ho mpanjifanao mety, inona no hividianana, ary aiza ary rahoviana ny fandaharam-potoana fitsaboana.
Ankehitriny dia vonona ny hiresaka mikasika ny fomba hiatrehana ny fotoana eo anelanelan'ny resaka voalohany miaraka amin'ny mpanjifa sy ny lesona voalohany amin'ny lesona miaraka amin'ny mpianatra vaovao.
Eritrereto indray ny sary lehibe ary eritrereto ny RESAKA. - Inona ireo tanjona kendrenao sy tanjona mandritra ny fotoana maharitra ho an'ity mpianatra manokana ity? Nahoana ny ray aman-dreniny no manasa anao amin'izao fotoana izao? Inona no ho vokatr'io ray aman-dreny tokony hojerena amin'ny zanany io? Rehefa mandefa ny zanany any amin'ny sekolim-panjakana ny ray aman-dreny, indraindray izy ireo dia ambany noho ny fanantenana satria malalaka ny fampianarana ary ireo mpampianatra dia manana mpianatra maro hafa hiara-miasa. Miaraka amin'ny lesona, ny ray aman-dreny dia miezaka mafy amin'ny vola latsaky ny minitra amin'ny vola minitra mavesatra ary te hahita vokatra. Raha mahatsapa izy ireo fa tsy miasa tsara amin'ny zanany, dia tsy haharitra ela ny mpampianatra sy ny lazanao. Ataovy an-tsaina foana ny tanjona alohan'ny fivoriana rehetra. Tanjona ny manao fandrosoana manokana mandritra ny ora sy ora isaky ny lesona.
Manamora ny fivoriana voalohany. - Raha azo atao, dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny fotoam-pifanakalozan-kevitra voalohany ho toy ny fifandimbiasana ho anao, ny mpianatra, ary farafaharatsiny iray amin'ny ray aman-dreny.
Mitondrà fanamarihana be loatra mandritra ity resaka ity. Ireto misy sasantsasany amin'ireo zavatra tokony hiresahanao amin'ity fihaonana voalohany ity:
Hazavao ny zavatra andrasan'ny ray aman-dreny.
Lazao azy ireo kely ny hevitrao momba ny lesona sy ireo paikady maharitra.
Manaova drafitra ny famandrihana sy ny fandoavam-bola.
Torohevitra voafaritra tsara amin'ny fomba tsara indrindra hiatrehana ny hery sy ny fahalemen'ny mpianatra.
Anontanio ny tetikady efa niasa taloha ary koa ireo izay tsy niasa.
Anontanio raha tsy te hifanerasera amin'ny mpampianatra mpianatra ianao raha te hahalala bebe kokoa momba ny mombamomba azy. Raha izany no izy, ankafiso ny fampahalalana mifandraika sy ny fanaraha-maso amin'ny manaraka.
Mangataha fitaovana rehetra mety hanampy amin'ny fivoriana ataonao.
Ataovy azo antoka fa ho toerana mangina ny toerana fivoriana ary ahafahanao mianatra.
Avelao ho fantatry ny ray aman-dreny izay zavatra takinao amin'izy ireo, mba hampitombo ny fahombiazan'ny asanao.
Hazavao fa tokony homena devoara ianao, ankoatra ny devoara-pampianarana efa hatry ny ela.
Ataovy ny fitsipika fototra. - Tahaka ny ao amin'ny efitrano fianarana mahazatra, maniry ny hahafantatra ny toerana misy azy ireo ny mpianatra ary inona no andrasana amin'izy ireo. Tahaka ny andro voalohany amin'ny sekoly, miresaka momba ny fitsipika sy ny andrandrainao, ary mamela ny mpianatra hahalala anao kely fotsiny. Lazao azy ireo ny fomba hikarakarana ny zavatra ilainy mandritra ny fotoam-pivoriana, toy ny hoe mila rano fisotro izy na mampiasa ny efitra fidiovana. Tena zava-dehibe tokoa izany raha toa ianao ka mampianatra any an-tranonao, fa tsy ny mpianatra, fa ny mpianatra no vahiny ary mety tsy ho tony aloha. Amporisiho ilay mpianatra hangataka fanontaniana maromaro araka izay ilainy. Ity dia iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny lesona iray isaky ny iray, mazava ho azy.
Miezaha hifantoka amin'ny asa sy ny tanjona isaky ny minitra. - Ny fotoana dia vola miaraka amin'ny fampianarana. Rehefa mandroso miaraka amin'ilay mpianatra ianao, dia mametraha feo ho an'ny fivoriana mahavelona izay isaina isa-minitra. Tohizo ny fifanakalozan-kevitra mifantoka amin'ny asa atrehina ary hazòny ilay mpianatra ho tompon'andraikitra amin'ny hatsaran'ny asany.
Hevero ny fanatanterahana ny endrika fampitaovana ny ray aman-dreny. - Ny ray aman-dreny dia maniry ny hahafantatra izay ataonao amin'ilay mpianatra isaky ny fivoriana ary ny fomba ifandraisany amin'ny tanjona napetrakao. Eritrereto ny mifandray amin'ny ray aman-dreny isan-kerinandro, angamba amin'ny alalan'ny mailaka. Azonao atao koa ny manoratra taratasy kely antsasaka kely ahafahanao manoratra marika fampahafantarana ary ampidirin'ny mpianatra ao an-trano miaraka amin'ny ray aman-dreniny aorian'ny fivoriana tsirairay. Arakaraky ny hifandraisanao no hahitanao ny mpanjifa anao ho toy ny baolina kitra ary mendrika ny fampiasam-bola.
Mametraka rafitra fanaraha-maso sy faktiora. - Mandehana amim-pitandremana isaky ny ora isaky ny mpanjifa. Mitazona kalandrie taratasy aho izay anoratako isan'andro ny ora fianarako. Nanapa-kevitra ny hanao famandrihana amin'ny faha-10 amin'ny volana aho. Nahazo môdelin'ny banky aho tamin'ny alàlan'ny Microsoft Word ary nandefa ny bitsiko aho tamin'ny mailaka. Mangataka ny fandoavam-bola amin'ny fikarakarana aho mandritra ny 7 andro amin'ny faktiora.
Mijanòna eo am-pelatanana ary hitazona ny vokatrao ianao. - Manaova lahatahiry ho an'ny mpianatra tsirairay izay hitazona ny mombamomba ny fifandraisana, ary koa ny fanamarihana momba izay efa nataonao niaraka tamin'izy ireo, ny zavatra hitanao mandritra ny fotoam-pivoriana, ary ny zavatra kasainao hatao mandritra ny fivoriana ho avy. Amin'izay fotoana izay, rehefa manakaiky ny fotoam-pivoriana manaraka miaraka amin'ity mpianatra ity, dia hanana tsindrim-peo ianao amin'ny fahafantarana ny toerana nialanao sy ny zavatra manaraka.
Eritrereto ny politika hanafoanana anao. - Tena sahirana be ny ankizy ankehitriny ary maro ny fianakaviana mifangaro ary manitatra ary tsy miaina eny ambanin'ny tafo iray ihany. Izany dia miteraka toe-javatra sarotra. Antitrantero ireo ray aman-dreny fa zava-dehibe ny fanatrehana ny fotoam-pivoriana isaky ny fotoana ary tsy misy fanafoanana loatra na fanovana. Izaho dia nanangana ny politikam-panafahana 24 ora izay ahafahako mamaritra ny zo hametra ny tahan'ny ora rehetra raha toa ka nofoanana amin'ny fotoana fohy ny fivoriana iray. Ho an'ny mpanjifa azo antoka, izay tsy dia manafoana, dia mety tsy hampihatra izany zo izany aho. Ho an'ny mpanjifa mampidi-doza izay toa miala tsiny foana, manana an'io politika io aho ao am-paosiko. Ampiasao ny fitsaranao tsara indrindra, alao ny lalao, ary miaro ny tenanao sy ny fandaharam-potoanao.
Ampidiro ny fampahalalana momba ny mpanjifanao amin'ny findainao. - Tsy fantatrao na oviana na oviana ny zavatra hitranga ary mila mifandray amin'ny mpanjifa ianao. Rehefa miasa ho an'ny tenanao ianao, dia mila mifehy ny toe-javatra iainanao, ny fandaharam-potoanao, ary ny zavatra hafa mampihemotra anao. Ny anaranao sy ny lazanao no eo amin'ny tsipika. Tadiavo ny fandraisana andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fahamatorana sy ny zotom-po ary handeha lavitra.
Ireo toro-hevitra ireo dia tokony hanakana anao amin'ny fanombohana tsara! Tena tia fianarana tanteraka aho hatramin'izao. Mampahatsiahy ahy ny antony nahatonga ahy hampianatra amin'ny toerana voalohany. Tiako ny miara-miasa amin'ny mpianatra ary manova zavatra. Amin'ny fampiofanana dia afaka manao fandrosoana maharitra ianao raha tsy misy ny olana amin'ny fitondran-tena sy ny olana ara-pitantanana.
Raha manapa-kevitra ianao fa ny mpampianatra dia ho anao, maniry anao vintana maro aho ary antenaiko fa ireo toro-hevitra rehetra ireo dia nanampy anao!
Fanontaniana ifanakalozan-kevitra amin'ny fanabeazana
Mpivaro-pivoaran'ny mpampianatra: 10 singa fototra
Inona avy no ilaina ilain'ny mpampianatra?
Ny antony mahatonga ny mpampianatra
Ny fomba hakana an-dakozia mandritra ny efitrano fianarana
Mandamina ny Jobanao voalohany
Ahoana ny fomba hanoratana filazana filozofia momba ny filozofia
Te-ho mpampianatra ianao: 8 Zavatra ho fantatra
Inona no anjara asan'ny mpampianatra?
Mianara mianatra ny fototry ny mpampianatra mpianatra iray
Toro-hevitra nomena mba hahazoana fampianarana an'i Joba
The Sembler Verb Verb Regular: Ahoana ny fampiasana azy
Fantaro ny teny Japoney Shitsurei
Ny Fanombohan'ny Mirror
Blood, Sweatsh, ary ranomaso: Ny Statue de Mary Virginie ao Akita, Japon
Ny programan'ny famandrihana Password Password
Ny hatsaran'ny fifidianana 2012
ACT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny atrikasa Atlantic Coast
Rano ny famaritana kristaly
Nahita an'i Hitler Real Snub Jesse Owens tamin'ny Lalao Olaimpika Berlin tamin'ny 1936?
Laetoli - 3,5 tapitrisa taona Hominin Footprints tany Tanzania
Ny Andres Escobar Murder
Ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina
Ny Sarkophagan'i Pakal
Ny fomba hanamboarana "Accomplir" (hanatanterahana)
Nifidy ny filoha demokraty nifanarahana
Fijerin'i Marian nankasitrahana voalohany tany Etazonia
Amerika (The Band): Surreal Soft-Rock
Iza moa Rajput?
Ny maha-zava-dehibe ny marika Miozolomana
Ny fifehezana amin'ny fiarovana amin'ny fiadiana fiarovana
Mpikaroka Thomas Elkins